Archive de l'auteur | NewsMada | Page 921
Basikety – Mada N1A H/D 2016 : hiatrika ny “Coupe de la ligue” ireo ekipa roa voalohany
Par Taratra sur 17/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
« Coupe de la ligue de Diana ». Hetsika tafiditra amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja basikety, sokajy N1A lahy sy vavy. Fifaninanana tanterahin’ny federasiona malagasy (FMBB) miaraka amin’ny ligin’i Diana sy ny orinasa Telma, amin’izao fotoana izao, any Antsiranana. Araka izany, ireo ekipa tafavoaka roa voalohany isam-bondrona lahy sy vavy amin’io dingana voalohan’ny fifaninanam-pirenena io no […]
Tsipy kanetibe : hahazo fiara izay voalohany
Hotanterahina, ny asabotsy 18 sy ny alahady 19 jona ho avy izao, etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina, ny “Grand open doublette”, taranja tsipy kanetibe. Anisan’ny goavana sy hiavaka izy ity satria hahazo fiara Hyundai izay mivoaka ho mpandresy eo. Boss na “patron” miaraka amin’ny mpilalao iray efa kalaza no miaraka ao anatin’ny ekipa iray. Ho […]
fiovan’ny toetr’andro : tohanan’ny UE sy RFA Boeny, Sofia ary Analamanga
Par Taratra sur 17/06/2016 Economie, NS Malagasy
Tohanan’ny Vondrona eoropeanina (UE), Repoblika federalin’i Alemaina (RFA) sy ny GIZ, ny ao amin’ny minisiteran’ny Tontolon’ny iainana sy ny ala miaraka amin’ny ONE manoloana ny fiovan’ny toetr’andro. Natao sonia, omaly tao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola, ny fanampiana hoenti-miasa ho an’izany, nahazoana 9 tapitrisa euros, ka ny 8 tapitrisa euros na 29,6 miliara Ar […]
Lalana tapaka, lalana amboarina : mivaivay ny fitohanan’ny fifamoivoizana
Par Taratra sur 17/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Lalana amboarina etsy fahatapahan-dalana eroa. Mampisavoritaka tanteraka ny tanàna sy ny fifamoivoizana ireo. Miteraka fitohanan’ny fiara lavareny ihany koa ka mampimenomenona ny mponin’Antananarivo. Nanomboka omaly ny fanapahana ny Araben’ny Fahaleovantena. Tsy hifarana izany raha tsy amin’ny faramparan’ny volana jona. Mandeha ihany koa ny fanamboaran-dalana etsy sy eroa izay manapaka ny ampahan-dalana. Niteraka fikorontanana tanteraka teo […]
Koyama Satoru : manohy ny fiantohana ny ao Ambatovy ny Japoney #canada #sherrit #ambatovy
Noraisin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, omaly, ny filoha lefitry ny trano fiantohana japoney Nexi, Koyama Satoru, sy ireo mpiara-dia aminy. Io trano fiantohana japoney Nexi io no manohana ireo orinasa goavana mampiasa vola any ivelany, toy ny Ambatovy mitrandraka nikela sy kobalta eto Madagasikara. Manodidina ny 400 tapitrisa dolara ny fiantohana […]
Politikan’ny fampananana asa : am-perinasa ireo vaomiera mpanatanteraka
Nampahafantarin’ny minisitry ny Asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana momba ny asa, Toto Raharimalala Lydia omaly tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Ampefiloha ny fanatanterahana ny politikam-pirenena momba ny fampananana asa sy ny fanofanana momba ny asa (Pnefp) izay efa tafapetraka tamin’ny taon-dasa. Am-perinasa avokoa ireo vaomiera maro mampahomby ity politikan’ny asa ity. Iarahana […]
Atrikasa « Valiha Mikalo » : « Nahita ny very isika », hoy Rakotondrazafy Gérard
Par Taratra sur 17/06/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nametraka fanamby goavana ny fikambanana Ako Miantefa ! Efa tany amin’ny 80 taona mahery no nitady ny very ny Malagasy. « Tsy ao anatin’io vanim-potoana io intsony isika fa efa nahita ny very. Azo porofoina izany », hoy Rakotondrazafy Gérard, iray amin’ireo mpikambana nanorina ity fikambanana ity. Raha ny fanazavany, variana loatra ao anatin’ny « Mitady ny very » ny […]
Fitaterana an’habakabaka : tafavoaka ao amin’ny Annexe B ny Air Madagascar
Par Taratra sur 17/06/2016 Divers, NS Malagasy
Tafavoaka ao amin’ny Annexe B ny kaompania Air Madagascar. Nambaran’ny masoivoho eoropeanina, Antonio Sanchez–Benedito izany, omaly, tao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny. Dimy taona, tao anatin’io lisitra Annexe B io ny kaompania malagasy, izany hoe, voarara tsy nahazo nisidina any Eoropa ny fiaramanidina an’ny Air Madagascar. Niteraka fatiantoka lehibe izany ho an’ny kaompania malagasy, izay voatery nanofa […]
Datin’ny Taom-baovao Malagasy : ho fantatra amin’ny desambra ?
Tao anatin’ny taona maromaro, andro (daty) samy hafa no nanamarihana ny « Taom-baovao Malagasy ». Tranga tsy tokony hiseho, saingy noho ny fisian’ny voka-pikarohana sy fomba ary raki-tadidy isan-karazany, nizara roa farafahakeliny ny andro nankalazana io vanim-potoana lehibe io. Raha ny vaovao hita any anaty tambajotra sosialy, efa nijoro ankehitriny ny komity nasionaly misahana ny fametrahana ny […]
Hisesy ny seho maimaimpoana : hiara-dalana ny fetim-pirenena sy ny “fetin’ny Mozika”
Ho fararanon-danonana. Manomboka androany, hisesy ny fety etsy sy eroa, ho fanamarihana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Hiara-dalana amin’ny “fetin’ny Mozika” sy ny “Carnaval de Madagascar” rahateo izany. Toy ny mahazatra isan-taona, hahazo tombony amin’ny fety aman-danonana isan-karazany ny eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Efa nisy mantsy ny “podium” teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ary mbola hitohy […]
Trass Tsiadana : hitondra an-tsehatra ny « Irery aho » i Lija
“Irery aho”, lohatenin’ny rakikira navoakany farany. Manantena kosa anefa i Lija fa tsy ho irery amin’ny fotoana ifanomezany amin’ireo mpankafy, anio alina, eny amin’ny Trass Tsiadana. Izy irery ihany anefa no eny an-tsehatra amin’io, miaraka amin’ny zavamaneno ifandimbiasany eo. Fotoana iray hitondrany an-tsehatra ireo hira voarakitra ao anatin’io rakikira io izany, na efa telo taona […]
Fitsipahana ny and 20 amin’ny lalàn’ny serasera : hanohana ny mpanao gazety ny antoko Tim
Par Taratra sur 17/06/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tsy niandry ela fa namaly avy hatrany. Naneho fahavonony hiady ho an’ny mpanao gazety ny vondrona parlemantera Tim eny Tsimbazaza, manoloana ilay volavolan-dalàna momba ny fifandraisana sy ny serasera. « Taratry ny tsy fisian’ny fahalalahana io andininy faha-20 amin’ny lalàn’ny serasera io. Tsy ahitana taratra ny fahalalahan’ny mpanao gazety ka toherinay ny fampiharana izany », hoy […]
Haody : fetim-pirenena, fetin’ny Fahaleovantena…
… Izay ilazana azy, tsy maninona fa ny fomba fandraisana ilay vanim-potoana no zava-dehibe. Nahazo ny Fahaleovantenany ny Malagasy. Niverina tamin’io ny Fahaleovantenan’i Madagasikara ! Ho an’ny ankamaroan’ny mpahay tantara, « kisarisary » ihany io na « azo » na « naverina ». Hatramin’izao, tsy mbola azo lazaina fa mahaleo tena i Madagasikara sy ny Malagasy. Manaporofo izany ny fiankinan-doha lava amin’ny […]
Ho mpikamban’ny HCDDED : mihemotra ny fifidianana
Tsy tanteraka omaly ny fifidianana saika hataon’ny firaisamonina sivily izay ho solontenan’ny eo anivon’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED), raha tokony ho afakomaly ny fampielezan-kevitra. Ny antony, nitory eny amin’ny Filankevi-panjakana ny kandidà iray tsy voaray ho anisan’ny mpifaninana amin’izany. 20 ireo kandidà nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina. Niala […]
Voaasa amin’ny 26 jona ireo filoha teo aloha
« Efa niantso foana izahay ary vonona hifanolo-tanana. Mivelatra amin’ny adihevitra rehetra ho an’ny fampandrosoana ny firenena koa. Tsy ao anaty fifankahalana sy fifanenjehana anefa izany », hoy ny filoha Rajaonarimampianina teny Androhibe, omaly. Manoloana izany, nambaran’ny arofenitry ny Repoblika fa nasaina avokoa ho eny Mahamasina hanatrika ny matso sy hiara-kisakafo eny Iavoloha ireo filoha teo aloha […]
« Miaina miaraka » : 600 ny ankizy mpandray anjara
Andiany faha-26 ny hetsika ara-panatanjahantena « Miaina miaraka » karakarain’ny akany fibeazana ny ankizy manana fahasembanana, Les Orchidées blanches, omaly teny alarobia. Tanjona ny hampiaraka ny ankizy tsotra sy ny manana fahasembanana ara-batana ny ara-tsaina ao anatin’ny fifaninanana samihafa. Hazakazaka, vikin-dava, lancée de balles lestées, fifaninanana manetsika vatana ho an’ny ankizy manana fahasembanana ara-batana ny taranja nandraisan’ny […]
Fankalazana 26 jona Malaina ny vahoaka noho ny afitsoky ny mpitondra
“Efa be dia be ny resaka mandeha eny an-tanàna eny. Tsy fantatra: mba henon’ny mpitondra izany. Mahagaga ny hoe: tsy azon’ny vahoaka rehetra idirana ao amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny mpianatra avy any an-tsekoly no hoentina sy halefa ao. “ Io no nambaran’ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer, tamin’ny haino aman-jery tsy miankina iray, afakomaly, momba […]
Vonoan’olona feno habibiana : tratran’ny polisy ireo olona sivy namono olona teny Ambohidratrimo
Nidoboka am-ponja omaly ireo olona sivy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona feno habibiana teny Anosiala Ambohidratrimo, ny alin’ny 16 avrily 2016. Ny polisy misahana ny heloka bevava sakelika faharoa no nahasambotra ireto olona ireto ny alatsinainy ka hatramin’ny afakomaly teny Anosiala. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, nisy alim-pandihizana tao amina tanàna iray ao Ankorondrano […]
Befelatanana : trano lehibe iray kilan’ny afo, antapitrisany ny entana may
Trano lehibe iray misy rihana no levon’ny afo, omaly hariva teny Mahamasina ambonin’ny hopitaly Befelatanana. Tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao an-trano fa lasa lavenona… Naharitra adiny roa mahery vao voafehin’ny mpamonjy ny afo nandritra ity haintrano nahatsiravina, omaly tolakandro ity. Ambatolampy ny anarana fiantson’ny olona ity trano lehibe iray misy rihana […]
Fitakian’ny mpampianatra : mandinika vahaolana ny minisitera telo
Anisan’ny nitarika ny vokatra ratsy, nandritra ny CEPE andrana farany teo, ny fiovan’ny fomba fampianarana ho « pédagogie par objectif » (PPO) vao nampiharina tamin’ity taom-pianarana ity. Manampy izay ny fiovan’ny efitra niatrehana ny fanadinana ka misy fiantraikany amin’ireo mpiadina ihany, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Cisco Antananarivo Renivohitra. Raha vao novana fotsiny ny fomba fametraka fanontaniana amin’ny […]
Androhibe : hanao “voyage d’études” any ivelany ny mpianatry ny Enam
Hanamafy ny fahalalany amin’ny alalan’ny “voyage d’études” any ivelany ireo mpiasam-panjakana ambony andiany “Mamiratra” mandranto fianarana ao amin’ny Enam Androhibe. “Zava-dehibe ho anay mpiasam-panjakana manaraka fiofanana eto amin’ny sekoly ny nahatongavan’ny filoham-pirenena nijery ifotony ny fizotry ny fampianarana. Nivaly tamin’ny ampahany ny fahangatahan’ireo mpianatra manovo fianarana eto amin’ny sekoly amin’ny ahafahan’izy ireo manatanteraka ny voyage […]
Lalàna mifehy ny fifandraisana : namaly boribory ny filoham-pirenena
“Heveriko fa tokony handinika sady handini-tena isika rehetra eo amin’izay andraikitra misy antsika tsirairay avy eo amin’ny fampandrosoana ny firenena.” Valin-tenin’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny mpanao gazety momba ny volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana mahabe adihevitra amin’izao fotoana izao io, tamin’ny fitsidihany ny Enam, Androhibe, omaly. “Milaza aminareo aho, amin’ny ankapobeny: hevitra avy aminareo mpanao gazety no […]
Ampitatafika : tratra ireo jiolahy nangalatra 28 tapitrisa Ar
Saron’ny polisy avy ao amin’ny Commissariat central Tanjombato, ny talata 14 jona 2016 teny Ampitatafika, ireo jiolahy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fandrobana vola mitentina 28 tapitrisa Ar an’ny orinasa iray eto an-dRenivohitra. Araka ny fanazavan’ny polisy, voairaka hanatitra vola eny amin’ny banky iray eny Tanjombato, ny lehilahy mpamily iray antsoina hoe R. Francis Célestin niaraka tamin’ny […]
Ady saritaka tao amin’ny Kaominina Toamasina : nifamely totohondy tamin’ny mpiasa ny ben’ny Tanàna
Par Taratra sur 17/06/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Tsy toy ny fisehon’ny korontana hatramin’izay ny nitranga omaly fa tena ady totohondry mihitsy. Mifampitana tamin’ny mpiasa iray ny ben’ny Tanàna ary ireo « gros bras » miaraka aminy kosa, nidaroka ireo mpiasa sasany mitokona. Tantara mitohy… Elaela tsy heno. Nihenjana tampoka indray ny tady eo amin’ny ekipan’ny ben’ny Tanàna sy ireo mpiasa mitokona. Raikitra indray ny […]
Rugby – «Can 1B» : nomontsanin’i Sénégal ry zareo Zambianina
Par Taratra sur 16/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tamin’ny isa mavesatra 54 noho 3, nandresen’ny Liona Téranga avy any Sénégal an-dry zareo Zambianina, teo amin’ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 1B”, taranja rugby. Fihaonana notanterahina tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly alarobia. Tsy niady ny fihaonana fa toy ny nanaovan’i Sénégal fanazarantena fotsiny. Baolina nentin-tanana miisa 7 ka ny roa […]
« Précédent 1 … 919 920 921 922 923 … 1 062 Suivant »